Ninkii dalilay wasiirka howlaha Guud Cabaas Siraaj oo la xukamay . | AllPuntland.net
Gudoomiyaha Maxkamadda Darajada Kowaad Gashaanle Xasan Cali Nuur ayaa ku dhawaaqay xukunka labada eedeysane , Dable Ciidanka Xooga Dalka Axmed Cabdullahi Ceydiid ayaa lagu helay in uu ahaa askeriga xabbadda ku dhuftey, waxaana lagu xukumey dil toogasho ah. Seddex Alifle Cusmaan Salaad Barre ayaa maxkamadda xukuntay in lasii daayo.
Askariga la xukamay ayaa horay u dilay wasiirka howlaha Howlaha-guud ee dowladda fadaraalka allaha u naxariis Cabaas Siraaj , kadib markii gaari uu watay uu ku furay rasaas sababtay inuu isla goobta ku dhinto wasiirka .
Askarigaan 29 jirka ah ee lagu magaacbo Dable Axmed Cabdilaahi Cabdi ayaa lagu helay in uu isagu rasaasta furay oo uu riday 2 Xabo Taariikhdu markay 03/05/2017 abaaro 19:00 habeenimo oo mid ka mid ah ay wajiga kaga dhacday Marxuum Cabdaas Cabdilaahi Sh. Siraaj , Xeer ilaalinta ayaa maxkada ka hor cadeeyay in baaritaan la sameyay ay arintaan ku cadaatay .
Maxkamada Darajada koobaad ee Ciidamadda Qalabka sida ee dowladda fadaraalka ayaa xuriyadiisa dib u siisay 3 ALIFLE Cismaan Salaad Bare oo danbi lagu wayay , waxaana maxkamadu amartay in laga siidaayo xabsiga hadaan loo haysan danbi kale .
gudoomiyaha Maxkamada ayaa sheegay in ay Racfaan u furantahay cidii dood ka qabta Xukunka .